Denizli Ski Center no Fankasitrahana Vaovao amin'ny Profesionalin'ny fizahantany | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACôte d'Ivoire Tiorka20 DenizliDenizli Ski Center no Fankasitrahana Vaovao amin'ny Profesionalin'ny fizahantany
23 / 01 / 2020 20 Denizli, Côte d'Ivoire Tiorka, ANKAPOBENY, TORKIA, TELPHER
toeran'ny ski vaovao ho an'ny matihanina fizahan-tany
Lehibe indrindra Égée Ski ala nenina izay nanjary iray amin'ireo adiresy ao amin'ny tena ilaina ny fizahan-tany fonosana-dalana, indrindra fa ny Égée Torkia sy Mediterane mandray mpitsidika, anisan'izany ny efatra. Denizli Ski Centre, izay voatonona miaraka amin'ny fiderana ny mpitsangantsangana sy ny mpitsidika, dia fantatra amin'ny fitaovany sy ny kalitao.
Denizli Ski Center, izay napetraky ny Kaominin'i Metropolitan ho an'i Denizli mba hanana feo ao amin'ny fizahantany amin'ny ririnina, dia nanjary tian'ireo orinasa mpizahatany sy ny masoivoho fizahan-tany. Denizli Ski Center, izay hita ao Bozdağ, ao anatin'ny sisin'ny distrikan'i Nikfer any amin'ny distrikan'i Tavas, izay lasa toerana tena ilaina sy ankafizina indrindra amin'ireo fonosin'ny orinasa fizahan-tany, dia nanomboka nanentana fiara fitateram-bahoaka am-polony isan-andro. Noho ny fiatoana ny fitsidihan'ny semester, ny fampitaovana, izay tena tarihin'ny mpitsidika, dia malaza amin'ny resaka fahalalahan'ny fitaterana, serivisy atolotra ary ny kalitao. I Mehmet Teke, filohan'ny fikambanana Metropolitan BELTAŞ, dia nilaza fa mbola mitaky fangatahana be ny Centre d'Ikiizizia, ary ny orinasam-pizahan-tany dia manana fahalianana betsaka amin'ny foibe ski. Teke nanamarika fa izy ireo tsy tapaka mifandray amin'ny fizahan-tany, "Ny olom-pirenena dia misafidy ny tsirairay ary koa ny fitsidihana Ski amin'i Torkia ny orinasa fa ilaina", hoy izy.
"Denizli dia manana ny filazan'ny fizahan-tany ririnina"
Ny ben'ny tanàna Denizli Osman Zolan, Denizli Ski fizahan-tany orinasa izay lasa toerana tena ao amin'ny lavaka fantsakana, indrindra manodidina ny Égée sy Torkia hoy foana izy ireo voly amin'ny alalan'ny anisan'izany ny Mediterane. Ny fanamafisana fa ny pokontany ski lehibe indrindra an'i Aegean dia famatsiam-bola tena manan-danja ho an'i Denizli ary i Denizli dia manana ny filazan'ny fizahan-tany ririnina miaraka amin'ilay fitaovana, hoy ny filoha Zolan, "miandry ny olona rehetra te-hankafy ny oram-panala sy ny fitsangatsanganana amin'ny pokontany Ski Denizli izahay".
Afa-po ny mpitsidika, mankasitraka ny vahiny sy ny matihanina momba ny fizahantany ny orinasam-pizahan-tany izay niresaka momba ny trano ao amin'ny Centre Ski Denizli.
Gökhan Kırmızı (Torolàlana momba ny fizahantany): Malaza be tokoa ny Centre Ski Denizli tato anatin'ny taona vitsivitsy. Safidy iray ho an'ireo mpiasa mpizahantany amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina izany ary tena mahafinaritra ho an'ireo vahiny tonga maniry ny hialana amin'ny fialan-tsasatra amin'ny semester. Misy koa ny tanjaka miaraka amin'ny fahatongavan'ny fialantsasatra 15. Androany izahay dia avy tany Marmaris niaraka tamina andiana 80. Faly tokoa izy ireo. Izy io no trano tena mety indrindra amin'ireo fitsangantsanganana ski izay notsidihako hatreto. Mino aho fa hahatratra hatrany amin'ny ambaratonga malaza sy tsara kokoa amin'ny ho avy. Tena mahazo aina tsara ny tonga eo.
Mehmet İlhan (Torolàlana momba ny fizahantany): misy fangatahana avo be avy any Muğla ho an'ny Ivotoerana Ski Denizli. Toerana mahafinaritra sy fialofana ary tsy misy loza ireo. Ho saram-pitombana ho an'ny mpizahatany eto an-toerana ny vidiny ary bebe kokoa ho an'ny mpizahatany vahiny. Toerana takiana izany satria akaikin'ny tanàna manana toe-tany mafana toa an'i Muğla, Aydın ary İzmir. Tsy nisy fiverenana ratsy avy amin'ireo olom-pirenena nentinay hatreto. Misaotra ny tanànan'i Denizli Metropolitan.
Onur Orhun: Sambany vao tonga avy any Bodrum izahay. Ka tsara tarehy. Izahay dia handeha tany Davraz. Ity no fotoana voalohany tonga teto an-dàlana ary tiako indrindra. Tsara ny toetrandro, tsara ny kalitao. Manoro hevitra ity toerana ity amin'ny rehetra aho. Ho avy eo indray isika raha vao afaka manana fotoana.
Burak Çıtır: Indray andro izahay no tonga teto. Sambany izahay no tonga ary avo kokoa noho ny nantenainay. Miarahaba ny fivondronan'i Denizli Metropolitan, nahavita nampidi-bola be izy ireo. Ilaina ny toerana toy izany any amin'ny faritra. Ny kalitao tsara dia tsara, ny làlana dia tsara tarehy, misy ihany koa ny faritra mahafinaritra ho an'ireo olom-baovao. Misy faritra sima ho an'izay tonga miaraka amin'ny fianakaviana sy ny zanany. Ny fehikibo mandeha dia tena mahomby. Fahasalamana ho an'ny tanan'ireo izay manao.
Kaan Çamtepe: trano tsara tarehy. Afaka miaraka amin'ny ankizy ianao, misy fotoana tena tsara ahafahana milelona. Ara-dalàna ny vidiny. Ny maha-akaiky azy dia mahafinaritra. Tonga tao Izmir tao anatin'ny 3 ora izahay. Tsara izany.
Çağdaş Börühan: Avy any Lüleburgaz aho. Tena tiako io toerana io. Mazava ho azy fa tsy nanantena firy aho. Lavitra dia lava ny lalana, zahana tsara sy tsara tarehy. Tena faly izahay tonga. Tena ambony noho ny fanantenana izany. Tiako be ilay izy amin'ny resaka kalitao sy ny halavan'ny lalana ary ny fahafinaretana kely.
Turgut Ölemez: Avy amin'i Van aho. Efa tany amin'ireo trano fandraisam-bahiny nisy ski izahay taloha, fa i Denizli dia iray amin'ireo manana làlana mahafinaritra. Tsara ny kalitao dia tsara ny lalana.
Ny kisarisin'i Kemer "Olympos teleferik"
Ny famantarana ny Kemer "Fiara fitaterana Olympos"
Ny Ski Center Yıldıztepe dia nanjary liana amin'ny mpialona isan'andro
Toerana fiantsonan'ny fiaramanidina Arkut Mountain
Voninkazo roa vaovao ho an'ny fizahan-tany bisikileta
Fialantsasatra vaovao amin'ny fizahantany fizahan-tany Yeni Denizli "
Ny tena tiako indrindra amin'ny Winter Sports Kaçkars
Ny tena tiany indrindra amin'ireo tia ski Palandöken
Ny fiara dia ny fiaran-dàlamby vaovao
Ski Resort Bozdag
Fizahantany fizahan-tany Denizli